Budata Unlocker 1.9.2 maka Windows
Ikpo okwu: Windows |dị: 1.9.2 Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Windows (0.16 MB)
Ọ dị mfe ihichapụ faịlụ na nchekwa ndị na-enweghị ike ihichapụ na Unlocker! Mgbe ị gbalịrị ihichapụ faịlụ ma ọ bụ folda na kọmputa Windows gị, A gaghị eme ihe a nihi na folda ma ọ bụ faịlụ ahụ mepere na mmemme ọzọ. Mechie folda ahụ wee nwaa ọzọ wdg. Ihe omume ị nwere ike iji dozie njehie ị nwetara. Unlocker download bụ nefu na otu esi eji ya? Ọ bụ mmemme nhichapụ faịlụ na folda dị mfe iji. Site na ịpị bọtịnụ Download Unlocker dị nelu, ị nwere ike ibudata ụdị obere obere (enweghị nwụnye, enweghị nwụnye) na kọmputa gị wee bido iji ya ozugbo.
Unlocker bụ mmemme nhichapụ faịlụ nke na-enye ndị ọrụ ezigbo ihe ngwọta maka ihichapụ faịlụ ndị na-enweghị deletable na ihichapụ folda na-abụghị deletable. Enweghị ike ihichapụ faịlụ: Agaghị enweta nnweta. Nsogbu ihichapụ faịlụ na folda dị na Windows, dị ka Isi mmalite ma ọ bụ faịlụ lekwasịrị anya nwere ike iji., Mmemme ma ọ bụ onye ọrụ ọzọ na-eji faịlụ ahụ. faịlụ a anaghị adị ugbu a. kpebie.
Unlocker, nke bụ sọftụwia ị nwere ike ibudata ma jiri na kọmputa gị kpamkpam nefu, na-emeghe faịlụ na folda anyị enweghị ike ihichapụ na kọmputa anyị maka ebumnuche dị iche iche, na-eme ka anyị nwee ike ihichapụ faịlụ na folda ahụ. Nọnọdụ dị otú ahụ, sistemụ arụmọrụ Windows nwere ike inye anyị ozi njehie dị iche iche. Mgbe ụfọdụ enwere ike ịgwa anyị na anyị enweghị ikike ihichapụ faịlụ ma ọ bụ folda ahụ anyị chọrọ ihichapụ. Ozi njehie ndị ọzọ nwere ike ịpụta, dị ka faịlụ ma ọ bụ folda a ga-ehichapụ bụ nke usoro ma ọ bụ onye ọrụ dị iche na-eji, faịlụ ahụ ka na-arụ ọrụ, edere diski ahụ. Nokwu ndị a niile, ịnwere ike iji Unlocker wee wepu faịlụ ma ọ bụ folda ahụ.
Olee otú Jiri Unlocker?
Unlocker nwere ike iwekota onwe ya nime nri-pịa onodu menu. Mgbe ịpịrị faịlụ na folda ọ bụla na bọtịnụ aka nri aka nri, ị nwere ike ịhụ ụzọ mkpirisi Unlocker na menu mepee ma nwee ike ịmalite usoro mmeghe site na ịpị ụzọ a. Unlocker nwere ike depụta gị ihe nchịkwa nke na-achịkwa ma kpọchie ohere faịlụ ma ọ bụ folda ahụ. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike iwepu njikwa nke isi mmalite niile na faịlụ ma ọ bụ folda ahụ na ịpị otu Pịa. Mgbe usoro a gasịrị, ọ ga-ekwe omume ihichapụ faịlụ na folda nke ị na-enweghị ike ihichapụ tupu.
Right pịa na nchekwa ma ọ bụ faịlụ ma họrọ Unlocker.
Ọ bụrụ na ekpochiri folda ahụ ma ọ bụ faịlụ ahụ, windo ga-apụta na-edepụta mkpọchi ahụ.
Naanị pịa Kpọghe niile!
Unlocker bụ sọftụwia ị nwere ike iji dị nfe nihi na ọ na-abịa site na nkwado ndị English.
Rịba ama: Noge usoro ntinye nke usoro ihe omume ahụ, a na-enye ndị ọrụ ọrụ ntinye maka ngwanrọ nke atọ. Ya mere, anyị na-akwado ka ị gbasoo usoro nrụnye ahụ nke ọma.
Ngwa ndị emetụtara: Budata IObit Unlocker
Nha faịlụ: 0.16 MB
Mmepụta: Cedrick Collomb
Kacha ọhụrụ na: 18-11-2021
Ọ dị mfe ihichapụ faịlụ na nchekwa ndị na-enweghị ike ihichapụ na Unlocker! Mgbe ị gbalịrị ihichapụ...
IObit Unlocker bụ obere ihe bara uru nke na-enye gị ohere ihichapụ faịlụ na folda gị nke ị gbalịrị...
Disk zoro ezo bụ mmemme imepụta diski mebere nke ị nwere ike iji dị ka onye ọrụ Windows PC iji zoo...
EaseUS Partition Master Free bụ mmemme Windows nefu na-enye ohere nkewa, ihicha, ịkọwapụ, cloning,...
Obere ma di ike mmemme, WinUSB na-enye gị ohere ịkwadebe bootable USBs. Na WinUSB, nke na - enyere...
NIUBI nkebi Editor na-apụta dị ka mmemme nkewapụta disk kachasị ọsọ ma dịkwa nchebe. Ihe omume...
Site na Glary Tracks Eraser, ị nwere ike ihicha faịlụ na akụkọ na-enweghị isi na diski ike gị. Ihe...
Auslogics Disk Defrag bụ mmemme nefu, ngwa ngwa na arụ ọrụ nke nwere ike ibudata mpịakọta diski ike...
Defraggler bụ mmemme disfashimentị disk sụgharịrị nefu nke Piriform mepụtara ma mepụtara, onye...
Ihe nhichapụ faịlụ echedoro bụ usoro nhichapụ faịlụ echedoro nke m chere na onye ọrụ Windows ọ bụla...
Ọ bụrụ nịchọrọ ka a hazie faịlụ data gị na folda gị na akpaghị aka, DropIt, ngwa dị mfe, pere mpe...
FreeCommander XE bụ ihe ọzọ na Windows Explorer nke na-abịa tupu arụnyere na sistemụ arụmọrụ...
AnyReader bụ sọftụwia na -enye gị ohere idetuo data nke ọma na diski ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla mebiri...
SecretFolder bụ ngwa bara uru na nke a pụrụ ịdabere na ya nke ezubere iji encrypt folda gị na...
Advanced Renamer bụ ngwa Windows maka ịmegharị ọtụtụ faịlụ notu oge. Na mgbakwunye, usoro ihe...
Glary Disk Cleaner bụ otu nime ngwaọrụ efu nke ndị ọrụ chọrọ idobe diski ike kọmputa ha ka o kwere...
IObit Smart Defrag bụ mmemme diski diski na - akwụghị ụgwọ nke na - enyere ndị ọrụ aka inweta...
Ngwa WD Drive bụ ụdị ihe njikwa disk ị nwere ike iji na ngwaọrụ ndị dabeere na Windows. Ngwa...
Onye njikwa nkebi efu, mmemme na -ewusi ike gị ike na draịvụ kọmputa nke desktọọpụ gị, na -adọta...
Enwere ike ịkọwa NetDrive dị ka ngwa ọrụ na -enye gị ohere iji akaụntụ igwe ojii gị dị ka diski...
Ngwá Ọrụ Usoro Nchekwa USB USB HP bụ mmemme bara uru nke na -enye ndị ọrụ nwere nsogbu na osisi USB...
Mmemme Jumpshare so na ọrụ efu nke ndị chọrọ isoro ndị enyi ha kerịta faịlụ na onyonyo nwere ike...
Gbochie Iweghachite bụ mmemme Windows efu nke nwere ike ihichapụ data niile na draịvụ ike gị na...